आइतवार २० अमेरिकी सेना नेपाल छिरे, नेपाली सेनासँग मिलेर के गर्दैछ ? — Sanchar Kendra
आइतवार २० अमेरिकी सेना नेपाल छिरे, नेपाली सेनासँग मिलेर के गर्दैछ ?
काठमाडौं । अमेरिकी सेनाले नेपाल प्रवेशका निम्ति अनेक बाहाना खोजिरहेको हुन्छ । बिगतदेखि नै अनेक बाहानामा पटक पटक नेपाल छिरेको अमेरिकी सेना फिर्ता नभएरै नेपालमै बस्ने गरेको छ ।
नेपालको भूगोल, हावापानी र खनिजजन्य बस्तुको अध्यन गर्नका लागि अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनासँग मिलेर कहिले तालिम दिने बाहानामा त कहिले कुनै बहाना बनाएर नेपाल छिर्ने गरेको छ ।
जनयुद्धकालमा माओवादीलाइ सखाप पार्न भनेर नेपाल छिरेको अमेरिकी सेनालाई माओवादी सेनाले रोल्पामा धुलो चटाएपछि ब्याक भएको थियो । त्यसपछि एमसीसी पास गराएर सुरक्षाको लागि भन्दै नेपाल छिर्ने योजना बनाएको अमेरिकी सेनाले तत्काल एमसीसी पास नहुने भएपछी अहिले तालिमको बाहाना बनाएर नेपाल छिरेको छ ।
सोमबारबाट सुरु हुने सैन्य अभ्यासमा भाग लिन २० जना अमेरिकी सेना नेपाल आएका छन्। नेपाली र अमेरिकी सेनाबीच भोलिदेखि ‘टीक नेल’ नामक सैन्य अभ्यास सुरु हुँदैछ। ‘टीक नेल’ अभ्यास विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रीत हुनेछ ।
नेपाली र अमेरिकी सेनाबीचको सैन्य अभ्यास काठमाडौं र पोखरामा हुनेछ । मुलुतः पानी र हिमालमा फसेकाहरुलाई कसरी उद्दार गरिन्छ भन्ने बारेमा अभ्यास केन्द्रीत रहने छ ।
अमेरिकी सेनाहरु पानी र हिमाली क्षेत्रमा उद्दारका लागि निपूर्ण मानिन्छन् । अभ्यासका क्रममा अमेरिकी सेनाले हिमाली क्षेत्रमा फसेकाहरुलाई गरिने उद्दारका बारेमा नेपाली सेनालाई तालिम दिनेछन् ।
अभ्यास भण्डैं एक महिनासम्म चल्ने छ।‘टीक नेल’ सैन्य अभ्यासको यो २२ औं संस्करण हो । यसअघिका २१ वटा संस्करण नेपालमा भएका थिए ।
अभ्यासमा नेपाली सेनाका ५० र अमेरिकी सेनाका विशेष २० जना फौज सहभागी हुनेछन् । विपद् व्यवस्थापनको तालिमका लागि अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनालाई उपलब्धिमुलक सहयोग गरेको दाबी गर्दै आएको छ।